Kerry oo ka hadlay dhismayaasha cusub ee Israel - BBC Somali
Kerry oo ka hadlay dhismayaasha cusub ee Israel
13 Agoosto 2013
Xohayaha arrimaha dibedda dalka Maraykanka, John Kerry ayaa sheegay in uusan u haysan in wadahadalada nabadda bariga dhexe ee qorshaysan todobaadkan ay saamayn doonto ku dhawaaqidda deegaanada cusub ee Daanta galbeed iyo bariga Quddus.
Mr Kerry wuxuu sheegay in dhawaqa Israel uu ahaa mid ilaa xad la sii filayay.
Wuxuu ku adkaystay in xukuumadda Washington ay u aragto dhamaan deegaanada kuwo sharci darro ah balse wuxuu sheegay in dhawaqa Israel ee maalintii Axadda ee ah in ay dhisayso ku dhowaad laba boqol oo guryo hor leh ah ay ahayd arrin ay horay u sii filayeen.
Wuxuu sheegay in sheegay in hoosta laga xariiqayo muhiimadda ay leeyihiin wadahadalada nabadeed ee Israel iyo Falastiiniyiinta u dhaxeeya oo lagu wado in ay dib u qabsoomaan maalinta Arbacada ah ee Beri.
Dhinaca kale Israel, ayaa sheegtay in ay diyaarisay labaatan iyo lix maxaabiis xarig waqti dheer ku xukun-nayd oo loo asteeyay in lagu sii daayo saacado ka hor xiliga wadahadaladu bilaabanayaan.
Waxaa loo magacaabay si qoysaska Israel ee dambiga in ay ka galeen loo haysto ay awood ugu yeeshaan in ay ka dacwoodaan dhinaca sharciga sii dayntooda.
Booliiska Israel ayaa sheegay in qalabka hortagga gantaalaha ee yaalla meel u dhow deegaanka Eilat uu ka hortagay hortagay gantaal lagu soo riday magaaladaas.